Isitolo esidayisa yonke impahla 3ply Extemable Facemask-type II Manufacturer and Supplier | Iglavu Elungile
Ukuvikela abasebenzi bezempilo kanye neziguli ezifweni ezithathelwanayo
Uhlobo Lwesibili Lokuhlinzwa Lokuhlinzeka luhlinzeka ngezinga eliphakeme kakhulu lokuvikelwa kwesithiyo esinokwethenjelwa. Ngokulingana okufanele okuqinisekisiwe ngesikhathi senqubo enwetshiwe, imaski ngayinye yakhelwe ngengcezu yekhala ebanzi egcwele. Siphinde futhi sinikeze uhla oluphelele lokugqoka okuhlinza okuvikelayo, okuningi kwakho okuholele ekubambisaneni nabasebenzi bezokwelapha emhlabeni jikelele.
Izimaski zobuso zohlobo lwe-II yimaski yobuso bezokwelapha eyenziwe ngezinto ezi-3 zokuvikela ezingavukiwe ezivimbela izinhlayiya ezinkulu ukuthi zifinyelele ekhaleni nasemlonyeni lapho zigqokwe.
Izinhlobo zobuso zohlobo II zisebenza kahle ngokuhlunga amagciwane ngama-98% *.
- isitayela sePleat ngezindlebe zezindlebe.
- Izinto zokuvikela ezingolukiwe ezintathu ezingqimba
- Ukusebenza kokuhlunga kwama-antibacterial ka-98% *.
Izimaski zobuso kufanele zisetshenziswe kanye nezinye izindlela zokuvikela ukutheleleka kufaka phakathi ukuwashwa kwezandla okujwayelekile ukuvimbela ukusabalala kwamagciwane. Iphakethe ngalinye linezimaski zobuso ezilahlwayo ezingama-50.
La maski obuso bohlobo II ahambisana ne-EN14683 ejwayelekile.
Igama lomkhiqizo Imaski yobuso bezokwelapha elahlwayo
Izinto I-PP engalukiwe + i-Melt ephezulu ishaywe + i-PP ayilukiwe
Thayipha I-EN14683 Uhlobo lwesibili lobuso bezokwelapha
inkambiso Impahla yemaski ebusweni, isiqeshana sekhala, ingalungiswa ngesicelo ngasinye samakhasimende,, ibhokisi langaphakathi, ibhokisi elakhiwe ngesicelo sekhasimende.
Usayizi 17.5 * 9.5 cm wabantu abadala
Inzuzo Isifonyo sobuso sikhululekile ukugqoka futhi senziwe ngezinto ze-premium ezizwakala zimnandi esikhunjeni.
Isitifiketi I-CE ne-ISO 13485 evunyelwe yi-TUV
Uhlobo lwe-EN14683 oluvunyiwe yi-SGS
I-EN14683 Uhlobo II selubhalisiwe eYurophu
Amasampula Amasampula amahhala ngaphakathi kwezingcezu eziyi-10
Ukupakisha 50pcs / box.2000pcs / ctn noma abanye
Ikhwalithi enhle yokuncibilika okuncibilikisiwe inikeza ukusebenza kahle kokuhlunga okungu- of 98% kokunemba. ukumelana kwamanzi okuphezulu kobuso bokufihla impahla eluhlaza ebesiyisebenzisa kungamelana namanzi. I-Face Mask ikhululekile ukugqoka futhi yenziwe ngezinto ze-premium ezizwakala zimnandi esikhunjeni.
Ububanzi bokusetshenziswa: Isetshenziswa emlonyeni nasekhaleni labasebenzi bezokwelashwa egumbini lokuhlinza ukuvimbela inkwethu namagciwane okuphefumula asabalale kuvuleke amanxeba okuhlinzwa, futhi kuvimbele uketshezi lomzimba lweziguli ezihlinzekwayo ukuthi ludluliselwe ekusakazweni kwabasebenzi bezokwelapha, kudlala indima yezindlela ezimbili eziphilayo ukuvikelwa.
Izimo zokugcina: Lo mkhiqizo kufanele ubekwe egumbini elinomoya opholile, elipholile ukugwema ukukhanya.
Ikhwalithi yendwangu encibilikayo idlala indima ebalulekile kwikhwalithi yamaski. Intengo yamamaski ethu ayinakuba phansi kakhulu, ngoba sidinga ukuthenga indwangu encibilikayo enekhwalithi eqinisekisiwe, ukuze kuqinisekiswe ukuthi amaski ethu afanelekile. Labo buso abanezintengo eziphansi kakhulu kungenzeka basebenzise izinto zendwangu encibilikayo ebiza kancane. Uma indwangu encibilikayo ingafanelekile, imaski nayo kufanele ingafaneleki.
Lo mkhiqizo ungowesikhathi esisodwa futhi uzobhujiswa ngemuva kokusetshenziswa.
Isikhathi ngasinye ngaphambi kokugqoka isifihla-buso ukungena endaweni yokusebenza, kufanele kwenziwe ukuhlolwa kokuqina.
Ngemuva kokuthi imaski ingcoliswe yigazi kanye noketshezi lomzimba wesiguli, kufanele ithathelwe indawo ngesikhathi.
4.Sebenzisa ngokuqapha kulabo abanezifo ezinzima zokuphefumula
Langaphambilini 3ply Uhlobo lwe-Facemask olulahlwayo I
Olandelayo: 3ply Alahlwayo Facemask-uhlobo IIR